အဆိုးမြင်ဝါဒီ ကောင်းကင်ကို (၂၂.၁၂.၂၀၁၃)
မှတ်ချက်။ ခေါင်းစဉ်ကို SEA Games ပိတ်ပွဲမှာ "We can do" ဆိုပြီး လူတွေနဲ့ စာလုံး သရုပ်ဖော်ခဲ့တဲ့အတိုင်း ပေးထားတာပါ။
Posted by Kaung Kin Ko at 11:16 PM No comments: Links to this post
Facebook မှာ ရေးခဲ့တာကို ပြန်တင်တာပါ။
ရှေးကမြန်မာတွေ တော်တော်ညံ့တာပဲ။ ခုခေတ်မြန်မာတွေလို မဟုတ်ဘူး။ ၁၉၆၉ တုန်းက မြန်မာမှာ အရှေ့တောင်အာရှ အားကစားပွဲကြီး လုပ်ခဲ့တဲ့အပြင် မြန်မာလည်း ဗိုလ်စွဲခဲ့တာတောင် motivationလည်း မဖြစ်ကြဘဲ စုတ်ပြတ်သတ်သွားလိုက်တာ အဆင်းရဲဆုံး နိုင်ငံဖြစ်သွားတဲ့အထိပဲ။ တို့ခေတ်နဲ့များ ကွာပါ့။
အတည်ပြောရရင်… တချို့တွေက ဆီးဂိမ်းဖွင့်ပွဲ ကြီးကျယ်ခမ်းနားမှုကြောင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ တိုးလာမယ် ဆိုတာကို ထောက်ပြကြတာရှိတယ်။ ရိုးရိုးလေး စဉ်းစားကြည့်။ ကိုယ်သာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမယ့် နိုင်ငံခြားသား ဆိုပါတော့။ ဆီးဂိမ်းဖွင့်ပွဲကြီး ခမ်းနားခြင်း မခမ်းနားခြင်းကိုကြည့်ပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှာလား။ ဥပဒေတွေ တည်ငြိမ်မှု ရှိမရှိ၊ သင့်လျော်မှု ရှိမရှိ၊ နိုင်ငံအခြေအနေ တည်ငြိမ်မှုရှိမရှိ၊ အဓိကရုဏ်းတွေ ရှိမရှိ ချင့်ချိန်ပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှာလား။ အပေါ်ယံလောက်ကြည့်ပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရလောက်အောင် ဘယ်သူဌေးမှ အမယ် မထင်။ စီးပွါးရေး ဘာမှ မလုပ်တတ်တဲ့ ကျနော်တောင် အဲလောက်မအဘူး။
နောက်ထောက်ပြကြတာက ဆီးဂိမ်းဖွင့်ပွဲကြီး ခမ်းနားတဲ့အတွက် motivation တွေ ဖြစ်စေတယ်တဲ့။ အဲဒါဆိုရင် အဲဒါကြီး မလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုရင် သိမ်ငယ်စိတ်ဝင်နေကြလို့လားဗျာ။ အဲဒါကြီး ဖြစ်မလာခဲ့ဘူးဆိုရင် ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ်လုပ်ဖုိ့ အားမာန် မရှိကြတော့ဘူးလား။ SEA Games ဖွင့်ပွဲဓါတ်ပုံကြီးတွေ နံရံမှာ ကပ်ထားပြီးမှ ကိုယ်လုပ်စရာ ရှိတာတွေ လုပ်ကြမှာ မို့လို့လား။ ဒါမျိုး ခမ်းနားမှုဆိုတာက တခါတလေမှ လုပ်နိုင်တော့ တဒင်္ဂပဲ ခံမယ့် motivation ပါ။ အင်တာနက်နှေးတဲ့အခါ၊ ကိုယ့်ဝန်ကြီးတွေ ခေါင်းဆောင်တွေ အသုံးမကျတဲ့အခါ၊ မီးပျက်တဲ့အခါ၊ အစစ အရာရာ လွဲချော်ပြီး မြန်မာ့နည်း မြန်မာ့ဟန် မြန်မာ့စနစ်တွေနဲ့ ထူးဆန်းနေတဲ့အခါ အဲဒီ motivation က ဆက်ရှိပါ့ဦးမလား။ ၁၉၆၉ အားကစားပွဲဆိုရင် မြန်မာက အိမ်ရှင်လုပ်နိုင်ရုံတင် မကဘူးနော်။ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတော်တော်များများမှာ ကစားကြတဲ့ အားကစားနည်းတွေနဲ့ချည်းပဲ မြန်မာက ထိပ်ဆုံးရောက်ခဲ့တာ။ ဒါတောင် အဲလို motivation က ဘယ်လောက်ခံလို့လဲ။ ဘယ်ခံမလဲ။ ဦးနေဝင်းမှ အသုံးမကျတာကိုး။ ဒီတော့ အဲလို motivation တွေက အပေါ်ယံ ခဏပဲခံမယ့် ဟာတွေပါ။ လုပ်နေတဲ့ နိုင်ငံရေးစနစ်တွေ၊ ပညာရေးစနစ်တွေ လွဲနေရင်၊ infrastructure တွေ မကောင်းရင်၊ တရားမျှတမှုတွေ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးတွေ မရှိရင် ဘာမှအလုပ်ဖြစ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
SEA Games ဖွင့်ပဲ ခမ်းနားလို့ သာမန်ချီးကျူးတာမျိုး၊ အားကစားပွဲတွေကို အားပေးတာမျိုး၊ ဖွင့်ပွဲပိတ်ပွဲမှာ ပျော်တာမျိုးကို လက်ခံပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မဆိုင်တဲ့ အကြောင်းပြချက်တွေနဲ့ အတင်းကြီး ဆွဲစေ့တာတော့ လက်ခံလို့ မရဘူး။ ဆီးဂိမ်းဖွင့်ပွဲ ခမ်းနားမှုကြောင့်တော့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလည်း ပြောပလောက်အောင် တက်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ (ဆီးဂိမ်းပွဲခဏမှာ လာပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမယ့်လူတွေ၊ စပွန်ဆာလုပ်မယ့်လူတွေတော့ ရှိတာပေါ့။ ဒါက ဖွင့်ပွဲ ခမ်းနားမှုနဲ့ ဘာမှမဆိုင်ဘူး။ နဂိုကတည်းက သူတို့အမြတ်အစွန်းရမယ်ဆိုရင် လာမယ့်သူတွေ)။ ဖွင့်ပွဲကို သာမန်လောက်လုပ်လည်း၊ ဒါမှမဟုတ် ဆီးဂိမ်းမလုပ်ခဲ့လည်း အမြတ်အစွန်းရချင်တဲ့သူကတော့ သူတို့အတွက် အခြေအနေကောင်းမယ်ဆိုရင် တွက်ချက်ပြီး လာကြမှာပဲ။
ပြီးတော့ တကယ်သာ motivation ဖြစ်နေရင်၊ စိတ်အားတက်ကြွနေရင် ဝေဖန်ထောက်ပြတာကိုပဲဖြစ်ဖြစ် အဆိုးမြင်တာကိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဘာစိတ်ဆိုးစရာ ရှိလို့လဲဗျာ။ ခိုင်မာနေရင် အဲလောက်နဲ့ motivation က ပြိုလဲသွားမှာ မဟုတ်ဘူးလေ။
ဖွင့်ပွဲအတွက် ကြိုးစားကြတဲ့ ကလေးတွေတို့၊ လူတွေတို့ကိုတော့ အသိအမှတ်ပြုပါတယ်။ ဥပမာ ရီးယဲမက်ဒရစ်တို့၊ မန်ချက်စတာ စီးတီးတို့က ငွေကြောင့် အောင်မြင်တယ်လို့ ပြောလို့ ရပေမဲ့ ....စီရော်နယ်ဒိုတို့၊ ဘေးလ်တို့၊ အဂွေရိုတို့၊ နီဂရီဒိုးတို့ ကတော့ တကယ်အားစိုက်ပြီး training ဆင်းရ၊ ကန်ရ လုပ်ရသေးတာကိုး။ ပိုင်ရှင်အတွက်က ငွေကြောင့်ဆိုတာ ဟုတ်ပေမဲ့ ကစားသမားတွေရဲ့ ပြောင်မြောက်တဲ့ ကစားပုံတွေကို ချီးကျူးတာက တပိုင်းပါ။ ဒီတော့ ဖွင့်ပွဲအတွက် ချွေးထွက်ခဲ့ကြတဲ့ ကလေးတွေကိုတော့ ချီးကျူးပါတယ်။ ဒါတောင်မှ ကလေးတွေ အဲဒီလိုသမိုင်းဝင်ဖွင့်ပွဲမှာ ပါဝင်ခွင့် ရခဲ့တာမျိုးထက်၊ နိုင်ငံက ပညာရေးဘတ်ဂျတ်တွေ များများသုံးပြီး ပညာရေးစနစ် ကောင်းမွန် အဆင့်မီသွားတာမျိုးကပဲ ကလေးတွေအတွက် ပိုပြီးအကျိုးရှိမှာပါ။
လူအများစုက၊ မကြာခင် ဒီဖွင့်ပွဲကြီးအကြောင်း မေ့သွားကြပြီး ပုံမှန်အတိုင်းဆက်ပြီး…. နိုင်ငံခြားမှာ တချို့တွေ သိမ်ငယ်စိတ်နဲ့၊ အခြေအနေ အရပ်ရပ်တွေကြောင့် မြန်မာဖြစ်လျက်နဲ့ မြန်မာမဟုတ်သလိုလို ညာပြောကြတာတွေ ဆက်ရှိနေဦးမှာပဲ၊ အဲလိုပဲ ကြွချင်တဲ့သူတွေကလည်း အကြောင်းမရှိအကြောင်းရှာပြီး မြန်မာကွ သာကီဝင်ကွ ဆိုပြီး ဆက်ကြွနေဦးမှာပဲ ဆိုတာကို သိပါတယ်။ အခုရေးလိုက်တာက မဆီမဆိုင် အကြောင်းပြချက်တွေဖြစ်တဲ့ ကမ္ဘာကြီးက ဆီးဂိမ်းကို စောင့်ကြည့်၊ အထင်တွေကြီးပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ အများကြီးပိုဝင်လာမယ် ဆိုတဲ့လူတွေ၊ ဖွင့်ပွဲကြီးက motivation တအားဖြစ်စေပြီး၊ အရာရာမှာ မြန်မာက ကမ္ဘာ့အဆင့်ကို “ဥုံ၊အပ်ချလောင်း” ဆိုပြီး မီလာတော့မလိုလို ပြောနေတဲ့သူတွေကို ထောက်ပြရုံ သက်သက်ပါ။
ကောင်းကင်ကို (December 13, 2013)
Posted by Kaung Kin Ko at 11:01 PM 1 comment: Links to this post
Posted by Kaung Kin Ko at 8:55 AM No comments: Links to this post
Click နေမှ မဟုတ်ပါဘူး။
မြန်မာကို ကမ္ဘာက မသိသေးရင်လည်း
မာန်ယောင်ဆောင်နေတဲ့ သိမ်ငယ်မှုတွေကို ခဏခေါက်ထား
အဲဒီ ကမ္ဘာကို စာဖတ်ခိုင်းလိုက်ရင် ရပြီ။
ကောင်းကင်ကို (ဒီဇင်ဘာ ၆၊ ၂၀၁၃)
Posted by Kaung Kin Ko at 10:27 PM No comments: Links to this post
မာရ်နတ်တွေ ဘုရားလို ပွင့်ပြနေတာ မြင်တိုင်း
Posted by Kaung Kin Ko at 12:48 PM2comments: Links to this post
ကောင်းကင်ကို (နိုဝင်ဘာ ၁၇၊ ၂၀၁၃)
Posted by Kaung Kin Ko at 6:59 PM No comments: Links to this post
Free Will လား Determinism လား
အခန်းထဲမှာတင် စကြဝဠာ ပတ်တိုင်း
ဘယ်စာအုပ်မှ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အစိုးမရဘူးလေ။
ကောင်းကင်ကို (နိုဝင်ဘာ ၇၊ ၂၀၁၃)
Posted by Kaung Kin Ko at 4:07 PM No comments: Links to this post
"တလက်မလေးတောင် အပါမခံနိုင်ဘူး" ဆိုသူတွေက
"မှားနေတယ်" လို့ ပြောကြသတဲ့။
ဒီမြေမှာမွေးခဲ့တဲ့ ဘာသာခြား ကျောင်းဆရာကို
မနေ့တနေ့ကမှ ဒီမြေကြီးပေါ် လူဖြစ်လာတဲ့ ကလေးပေါက်စက
"ဧည့်သည်" လို့ ခေါ်သတဲ့။
မိတ္ထီလာမှာ ကလေးတွေသေလို့ ငိုတဲ့မူစလင်တစ်ယောက်က
ဆက်ဒမ်နဲ့ ဘင်လာဒင်ကိုကျတော့ ကိုးကွယ်ပြန်သတဲ့။
မန္တလေးကောလိပ် ဖြစ်လာအောင် လုပ်ခဲ့တဲ့
မန္တလေးတက္ကသိုလ်မှာ ထားရေး ဆိုင်းငံ့ခံရသတဲ့။
"ကုလား"လို့ ခေါ်တာ မကြိုက်တဲ့ အိန္ဒိယနွယ်ဖွားတယောက်က
“တရုတ်”ကို “တယုတ်”လို့ ရေးလိုက်သတဲ့။
"တမလွန်ဆိုတာ ပုံပြင်တွေ" လို့ ပြောလိုက်တဲ့ စတီဖင်ဟောကင်းထက်
စကြဝဠာ အကြောင်း ပိုသိသတဲ့
မြန်မာပြည် အလယ်ပိုင်းမှာ မွေးတဲ့ကုလားက
သူ့ကိုယ်သူကျ "ပသီ" လို့ပြောပြီး
“ပါဏာတိပါတာ လုပ်သင့်သောအခါ” ကို
ရေးခဲ့တဲ့ ဆရာတော်ရဲ့ မေတ္တာဓါတ်ကြောင့်
"ဒီကောင်တွေကို ဗုံးကြဲပစ်သင့်တယ်"လို့ ဆိုခဲ့သူက
အင်စတီကျူးရှင်း တွေ မှိုလိုပေါက်လာပေမဲ့
ကောင်းကင်ကို (စက်တင်ဘာ ၂၇၊ ၂၀၁၃)
Posted by Kaung Kin Ko at 4:14 PM6comments: Links to this post
music ပိုင်း ဖန်တီးမှု မပါဘဲ အကုန် ကူးချထားတာ ဆိုရင် (melody နဲ့ arrangement အပိုင်းက) အနုပညာ သဘောဘယ်သက်ရောက်တော့မလဲ။ အတုပညာ ဖြစ်သွားမှာပေါ့။ creation သိပ်မပါတော့လေ။ (လုံးဝ မပါကြတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး)
ဒီနေရာမှာ စကားစပ်လို့ ပြောချင်တာက မူရင်း အဓိပ္ပါယ် ကောင်းလွန်းတဲ့ သီချင်းတွေကို၊ အကျိုးပြု သီချင်းတွေ၊ ငြိမ်းချမ်းရေး သီချင်းတွေကို ဖျက်ဆီးမပစ်ဘဲ မူရင်း စာသားနဲ့ နီးစပ်တာတွေ၊ မူရင်း အဓိပ္ပါယ်မျိုးတွေ ပြန်ရအောင် ရေးတာကိုတော့ ကြိုဆိုပါတယ်။ (ခွင့်မတောင်းရကောင်းလား၊ ကော်ပီ လုပ်ရကောင်းလား ဆိုသည်အထိ) ကျနော် အပြစ်လိုက်ပြောနေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ နိုင်ငံရဲ့ စီးပွါးရေး အခြေအနေ၊ ခွင့်တောင်းဖို့ ခက်တဲ့ အနေအထား၊ အများစုအတွက် (ဝမ်းရေးကြောင့်) တခုခုကို ဇောက်ချလေ့လာဖို့ ခက်တဲ့အနေအထား ဖြစ်နေလို့ပါ။ အဲဒီ့အထဲကနေ ကော်ပီ မရေးဘဲ ကိုယ်ပိုင် melody တွေ ဖန်တီးခဲ့တဲ့ ဆရာ စိုင်းခမ်းလိတ် ကိုတော့ အများကြီး လေးစားပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ အဓိက ဆိုးတာက credit ပေးလေ့ မရှိကြတာ၊ တခါတခါ ကော်ပီမှန်းတောင် ပြောလေ့ မရှိကြတာပဲ။ ဘာသာပြန် စာရေးဆရာတွေ နဲ့ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်။ သူတို့ဆို မူရင်းစာရေးသူ နာမည်ရော၊ မူရင်းစာအုပ်နာမည်ရော အမြဲလိုလို ထည့်ကြတယ်။
ကော်ပီ သီချင်းရေးတာက ထားတော့။ နိုင်ငံရဲ့ စီးပွါးရေး အခြေအနေနဲ့လည်း နည်းနည်းဆိုင်တယ်။ (ဒါတောင် တချို့နိုင်ငံတွေ မဖွံ့ဖြိုးပေမဲ့ မြန်မာနိုင်ငံထက် ကိုယ်ပိုင်သံစဉ် ပိုထွက်တယ်) ဒီမှာက သီချင်းတော်တော်များများက ကော်ပီနဲ့ မလွတ်သလောက် ဖြစ်နေပြီး တခါတခါဆို နိုင်ငံခြား သီချင်း တပုဒ်ထဲကို ဒီမှာ ၂ပုဒ် ၃ပုဒ် ဖြစ်နေရော။ ကြော်ငြာတွေဆိုရင်လည်း တခြားအိုင်ဒီယာလေးတွေနဲ့ ရိုက်ရင် ရရဲ့သားနဲ့ (သီချင်း လိုသည် ဖြစ်စေ မလိုသည်ဖြစ်စေ) ဆိုင်ဆိုင်မဆိုင်ဆိုင် ကော်ပီသီချင်းတွေပဲ သုံးကြရော။ ကော်ပီထဲမှာပဲ ပျော်မွေ့သလို ဖြစ်နေကြတယ်။
နောက်ပြီး သူတို့က အနုပညာရှင် အဖြစ် ခံယူထားသူတွေဆိုတော့ credit ပေးဖို့ ကိစ္စမှာ သာမန်လူတွေထက်ကို ပိုသိရမှာ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အဲဒါမျိုး ဘယ်သူမှ credit ပေးလေ့ မရှိလို့ မပေးကြတာ ဆိုရင် ဂီတလောကကြီး တခုလုံး အဲဒီ့ ကျင့်ဝတ်အပိုင်းမှာ နိမ့်ကျနေတဲ့သဘောပဲ။ အမှတ်တမဲ့နဲ့ ဘာသိဘာသာ ဆက်နေနေကြတာ ဆိုရင်လည်း အဲဒီ့အပိုင်းမှာ အသိတရား နည်းနေကြတဲ့ သဘောပဲ။ တဦးတယောက်ချင်း အသိတရား နည်းတယ် ဆိုတာထက် ဖြစ်သင့်တဲ့ အလေ့အထကို မမွေးကြပဲ တချို့က တာဝန်ပေါ့လျော့ကြတာ။ တချို့က မရိုးသားကြတာပါ။ သာမန်လူတွေ မဟုတ်ဘဲ အနုပညာရှင်လို့ ခံယူထားသူတွေ၊ ပရိသတ်ဆီက မေတ္တာနဲ့ ငွေကြေးကို ရယူထားသူတွေမို့ ပိုပြီး အသိတရား ရှိသင့်တယ်လို့ ကျနော် ထင်မိပါတယ်။
ကိုယ့်မြန်မာအချင်းချင်း သီချင်းဆို အဲလိုလုပ်လို့ မရဘူး မဟုတ်လား။ ကိုယ့် အနုပညာ ပစ္စည်းတစ်ခုကို တခြားသူ တယောက်ယောက်က credit မပေး၊ ဘာမပေးနဲ့ လုပ်ချင်သလို လုပ်သွားရင် ဘယ်လို ခံစားရမလဲ။
အနည်းဆုံးတော့ ဘာသာပြန် စာရေးဆရာတွေလိုမျိုး မူရင်းကို credit ပေးကြတာမျိုးကို အတုယူသင့်တယ်။ ကာဗာလေးမှာ မူရင်း သီချင်း နာမည်လေးတွေ သေးသေးလေး ရိုက်ပေးတာက နေရာလည်း အရမ်းမယူပါဘူး။ ပြီးတော့ ကော်ပီမှန်းသိပေမဲ့လည်း လူတွေက နားထောင်ကြဦးမှာပဲ။ ကော်ပီကို ကိုယ်ပိုင်သံစဉ်လိုလိုနဲ့ လိမ်တာကို သိသွားရင်တောင်မှ လူတွေ စိတ်မကွက်ဘဲ ဆက်နားထောင်ကြသေးတာ။ credit ပေးရုံနဲ့ အထင်သေးသွားပြီး နားမထောင်တော့ဘူးဆိုတာလည်း မရှိနိုင်ဘူး။
အခုတော့ ကော်ပီတွေ လျှော့ပြီး ကိုယ်ပိုင် သံစဉ်တွေ များများ ဖန်တီးရေးဆိုတာကို အသာထား၊ မူရင်းကို credit ပေးရေးကိုတောင် ကိုယ့်ဆီက ကော်ပီသမားတွေ တော်တော် လုပ်ယူရဦးမယ်။
Posted by Kaung Kin Ko at 9:47 AM3comments: Links to this post
Equality is still considered asalow-key affair,
but incurable optimists are buildingacastle in the air.
what we have to do is to climb the Mount Everest, not to live in an ivory tower.
And the sun will not rise in the witching hour.
by Kaung Kin Ko (September 9, 2013)
(Adaption of my own Burmese poem)
ကျနော့်ရဲ့ ခက်တယ် ဆိုတဲ့ မြန်မာကဗျာ (http://kaungkinko.blogspot.com/2009/10/blog-post_20.html) ထဲက နောက်ဆုံး အပိုဒ်ကို အင်္ဂလိပ်လို “ပြန်ရေး” ထားတာပါ။
ညဥ့်နက်သန်းခေါင်မှာ နေမထွက်မှန်း ..
ကောင်းကင်ကို (အောက်တိုဘာ ၂၀၊ ၂၀၀၉)
“ဘာသာပြန်တယ်” လို့ မသုံးဘဲ ပြန်ရေးတယ်လို့ သုံးထားတာက တိုက်ရိုက် ဘာသာပြန်တာ မဟုတ်ဘဲ အဲဒီ့ အပိုဒ်ရဲ့ theme နဲ့ metaphor တချို့ ပြန်ယူထားလို့ပါ။
မူရင်းကဗျာမှာ “ရှေ့ကတောင်ဟာ ဧဝရက်မှန်းနဲ့၊ ညဥ့်နက်သန်းခေါင်မှာ နေမထွက်မှန်း” ဆိုတဲ့ အတွဲလိုက် နဘေ ထည့်ရေးထားတာမို့ ၊ အင်္ဂလိပ်လိုမှာလည်း rhyme ပါရင် ကောင်းမယ် ဆိုပြီး ခံစားမိလို့ နောက်ဆုံးစာလုံးတွေကို rhyme ပါအောင် ရေးထားတာပါ။ “affair” နဲ့ “air” ၊ “tower” နဲ့ “hour” ပေါ့။
လေကိုဖမ်းပြီး ဒန်းဆင်တယ် ဆိုတဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ မရှိဘူး။ daydreaming လို့လည်း ရိုးရိုးမသုံးချင်ဘူး။ ဒီတော့ လေထဲမှာ ရဲတိုက်ဆောက်နေကြ တယ် “buildingacastle in the air” လို့ ရေးလိုက်ပါတယ်။ “air” နဲ့ ကာရန်ယူချင်တာရော၊ မြန်မာနိုင်ငံမှာ equality ဆိုတာ မရှိသေးတာရော ထည့်ချင်လို့ အပေါ်မှာ “Equality is still considered asalow-key affair” ဆိုတဲ့ စာကြောင်းကို အပိုထည့်လိုက်ပါတယ်။
ညဥ့်နက်သန်းခေါင်ကို ရိုးရိုး midnight လို့ မသုံးဘဲ witch တွေကျက်စားတဲ့ အချိန် (the witching hour) လို့ သုံးလိုက်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ witch က female သဘောကိုရည်ညွှန်းချင်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ မကောင်းဆိုးဝါးတွေ ကို ရည်ညွှန်းတာပါ။ မြန်မာမှာလည်း မကောင်းဆိုးဝါးတွေ ကျက်စားနေတုန်းပဲ မဟုတ်လား။ ဒီတော့ the witching hour ဆိုပြီးတော့ မကောင်းဆိုးဝါးတွေ ကျက်စားတဲ့ ညဥ့်နက်သန်းခေါင်အချိန်မှာ နေမထွက်ဘူး လို့ ရည်ညွှန်းတဲ့ သဘောမျိုးပါ။
ပြီးတော့ အဓိပ္ပါယ် အံဝင်ခွင်ကျလည်း ဖြစ်စေမယ့်၊ ရှေ့အပိုဒ်မှာ ပြောထားတဲ့ (incurable optimists) တွေနဲ့ လိုက်ဖက်မယ့်၊ အောက်စာကြောင်း hour နဲ့လည်း rhyme မိမယ့် tower .... “ivory tower” ဆင်စွယ်ဘုံနန်း ဆိုတဲ့ဟာကိုလည်း ကျနော့် မြန်မာကဗျာမှာ မပါပေမဲ့ အပိုထည့်ထားပါတယ်။
ဘာသာစကားတွေရဲ့ သဘောသဘာဝ မတူတော့ ကဗျာတွေကို များသောအားဖြင့် တိုက်ရိုက် ဘာသာမပြန်ချင်ဘူး။ တိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်လို့ မရတာလည်း များတယ်။ ပြန်လိုက်ရင်လည်း မူရင်းကနေ အများကြီး ဆုံးရှုံးသွားရော။ ကာရန်တွေ၊ ရစ်သမ်တွေ ပြန်မပါတော့တာတင် မဟုတ်ဘူး။ မူရင်း ဘာသာစကားမှာ ကွက်တိဖြစ်နေပေမဲ့ နောက်ဘာသာစကားနဲ့ အံမကိုက်တော့တာတွေ၊ တင်စားမှုတွေက နောက်ဘာသာစကားနဲ့ အံမဝင်တော့တာတွေ၊ မူရင်းဘာသာစကားရဲ့ အသုံးအနှုန်းမျိုး၊ တင်စားမှုမျိုး နောက်ဘာသာစကားမှာ မရှိတာတွေ စသည်ဖြင့် အခက်အခဲတွေ အများကြီးပဲ။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ရေးခဲ့တဲ့ ကဗျာဆိုရင် တခုပိုလုပ်လို့ ရတာက တိုက်ရိုက် ဘာသာမပြန်ဘဲ မူရင်း ကိုယ့်ကဗျာကိုယ် အခြေခံပြီး မူရင်း theme တွေ metaphor တွေနဲ့ ကစားလို့ ရတာတော့ ရှိတယ်။ တခြား ကဗျာဆရာ တယောက် ရေးထားတဲ့ဟာကို ဆိုရင်တော့ တိုက်ရိုက် ဘာသာပြန်မှပဲ ဖြစ်မှာပေါ့။ ကိုယ့်အာဘော်တွေ လျှောက်ထည့်လို့၊ အပိုတွေနဲ့ လျှောက်ကွန့်လို့ မဖြစ်ဘူးလေ။
စကားစပ်မိလို့ ပြောရရင်...တခါတခါ တချို့တွေ လွဲနေတာ ရှိတယ်။ မူရင်းကို မဖတ်ဖူးဘဲ မြန်မာ ဘာသာပြန်စာအုပ်တွေ ဖတ်ပြီးတော့ မြန်မာလိုမှာ စာချောရုံနဲ့ ဘာသာပြန်ကောင်းတယ်တဲ့။ တကယ်က မူရင်းကို အကုန်အစင် မဖတ်ဖူးဘဲ ဘာသာပြန် ကောင်းလိုက်တာလို့ ပြောလို့ မရဘူး။ စာချောတာပဲ ရှိတာ။ မူရင်းထဲက ဘာတွေ ချန်ခဲ့လဲ၊ ကျန်သွားလဲ၊ အဓိပ္ပါယ်တွေ လွဲသွားသေးလား စသည်ဖြင့် တိုက်ကြည့်ပြီးမှ၊ ဘာသာစကား နှစ်ခုကြားက မတူညီမှုတွေ၊ အခက်အခဲတွေ၊ ခွကျမှု (ဂွကျမှု) တွေမှာ ဘယ်လိုချိန်ဆထားလဲ၊ ဘယ်လို ပြေပြစ်အောင် အားထုတ်ထားလဲ၊ မူရင်းက ပြောတာတွေ ဘယ်လောက်ထိ ဘာသာပြန်မှာ ပြန်ပြီးပါလာလဲ၊ မြန်မာလိုမှာရော စာချောရဲ့လား စသည်ဖြင့် အဲဒါတွေ အကုန်လေ့လာပြီးမှ အဲဒီ့ဘာသာပြန် ကောင်းမကောင်း ဆုံးဖြတ်လို့ ရမှာ။ ကျနော် အခုလုပ်ထားတာကတော့ ဘာသာပြန်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ adaption ပါ။
စကားပြေကို ဘာသာပြန်ရင်တော့ ကဗျာကို ပြန်ရသလောက် ခွမကျဘူး။ ဘာသာစကားတွေရဲ့ သဘာဝချင်း မတူကြပေမဲ့ လိုအပ်ရင် စကားပြေထဲမှာ မှတ်ချက်အနေနဲ့ ထည့်ရှင်းပြလို့ ရတာရယ်၊ ဒုတိယ ဘာသာစကားမှာ မရှိတဲ့ စကားလုံးမျိုးကို အကျယ်ချဲ့ပြီး စကားလုံးအတွဲတွေနဲ့ သုံးလိုက်လို့ ရတာမျိုးတွေ ရှိတော့ တော်သေးတယ်။ ကဗျာမှာကျတော့ အဲလို ရှင်းပြနေရရင် ကဗျာပျက်ပြီပေါ့။ ပွယောင်းယောင်း ဖြစ်ကုန်မယ်။ စကားပြေမှာက အဓိပ္ပါယ် ကိုပဲ အဓိက ပြန်ကြရတာ များတယ်။ ကဗျာကို ဘာသာပြန်တာမှာကျ (များသောအားဖြင့်) အဓိပ္ပါယ်အပြင် မူရင်းကဗျာရဲ့ တခြားအလှအပတွေ၊ ဂုဏ်သတ္တိတွေကိုပါ ပြန်ပါအောင် အားထုတ်ရတာဆိုတော့ မလွယ်လှဘူး။ ဘာသာပြန်လို့ ရသည့်တိုင်အောင် (များသောအားဖြင့်) မူရင်းကနေ အများကြီး ဆုံးရှုံးသွားရော။
ကောင်းကင်ကို (စက်တင်ဘာ ၉၊ ၂၀၁၃)
Posted by Kaung Kin Ko at 5:48 PM 1 comment: Links to this post
Labels: english poems, ဘာသာပြန်
Posted by Kaung Kin Ko at 2:08 PM3comments: Links to this post
Posted by Kaung Kin Ko at 4:48 PM3comments: Links to this post
Posted by Kaung Kin Ko at 6:04 PM3comments: Links to this post